प्रेम छिप्पिएपछि काँडा उम्रन्छ र घोच्न थाल्छ ! - Nayabulanda.com
१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०७:१९ 354 पटक हेरिएको
काठमाडौं : एक साताअघि साहित्यकार प्रगति राईको उपन्यास ‘बिर्सिएको मृत्यु’ प्रकाशित भयो । राईका केही शुभचिन्तक पाठकहरुले आफ्नी प्रिय लेखकको समाचार प्रकाशित नभएपछि हामीलाई फोन गरेर चासो राखे । एउटा लेखकप्रति पाठकले दिएको त्यो महत्वपूर्ण सम्मान थियो । र, त्यही सम्मानलाई पछ्याउँदै हामी प्रगति राईलाई भेट्न उनको घरसम्म पुग्यौं ।
तपाईंले मदन पुरस्कारप्राप्त आफ्ना श्रीमान् एवं चर्चित लेखक राजन मुकारुङका विषयमा जे बोल्नुभयो र त्यो जसरी प्रकाशित भयो, त्यसले ठूलै चर्चा पाएको थियो, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
मैले सत्य कुरा बोलेकी हुँ । चर्चाका लागि त्यो कुरा गरेको थिइनँ । राजन मुकारुङसँग मेरो विवाह भयो, तर प्रेम हुन सकेन । २५ वर्षदेखि हामी श्रीमान–श्रीमती देखिन्छौं, तर सम्बन्ध प्रेमपूर्ण छैन । उनी आफ्नो बाटो हिँडेका छन्, मैले हिँड्न दिएकी छु । म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भने अरुलाई बाँध्नुहुँदैन । तर, मेरो एउटा भनाइ के छ भने श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रियो भन्दैमा श्रीमानका परिवारसँग पनि सम्बन्ध तोड्ने जुन चलन छ, त्यसको म विरोधी हुँ ।